အဲဗာတနျနဲ့ပှဲမှာ ယူနိုကျတကျ ဘယျလိုရလဒျတှဖွေဈလာမလဲလို့ ပေါလျမာဆနျ နဲ့ လျောရိုးတို့ကပွောပွီ။ – MAN U FAN CLUB
ခနျြပီယံလိဂျမှာလညျး ဗီလာရီးရဲလျရဲ့ ဦးဆောငျဂိုးသှငျးယူခဲ့တာကိုခံခဲ့ရပွီး သုံးပှဲဆကျ အရေးနိမျ့တော့မယျ့အခွအေနကေနေ လှတျမွောကျလာခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျဟာ ဒီတဈပတျမှာလညျး သူနဲ့ ရမှတျတူ ဇယားအောကျက အဲဗာတနျအသငျးနဲ့ အိမျကှငျးအိုးထရကျဖိုဒျမှာ ယှဉျပွိုငျကစားသှားရမှာဖွဈပါတယျ။ စနနေေ့ အစောပိုငျးပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈတဲ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ အဲဗာတနျတို့ရဲ့ ပှဲစဉျကို နာမညျကြျော ပှဲခနျ့မှနျးသူတှဖွေဈကွတဲ့ ပေါလျမာဆနျနဲ့ လောရိုးတို့ ကသူတို့ရဲ့ အမွငျတှနေဲ့ သုံးသပျပွထားကွပါတယျ။ ပေါလျမာဆနျ ကတော့ ယူနိုကျတကျအသငျး ကပျနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပမေယျ့ လောရိုးကတော့ (၂)ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျယူသှားမယျဆိုပွီး ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ပှဲအဖွကေ ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ…? ဘယျသူ့ရဲ့ သုံးသပျမှုက ပှဲပွီးရလဒျနဲ့ အနီးစပျဆုံးဖွဈလမေလဲ…? ပှဲအပွီးမှာ ပွောငျးပွနျရလဒျတှေ ထှကျလာမလားဆိုတာကတော့….
ပေါလျမာဆနျ ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ
အိုးထရကျဖိုဒျမှာ ဒီတဈပတျ စနနေေ့၊ ညနေ ၆ နာရီမှာ အဲဗာတနျနဲ့ ကစားမယျ့ ယူနိုကျတကျက ဘယျလောကျ ကံကောငျးနိုငျဦးမလဲ။ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗီလာရီးရဲလျက သူတို့ကို ဘောလုံးကို ဘယျလိုကစားရလဲ ဆိုတာ ပွသသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က ကံကောငျးသှားခဲ့လို့ နောကျဆုံးမိနဈမှာ အနိုငျဂိုး ရသှားခဲ့တာပါ။
ဆုဖလားတှရေယူနိုငျဖို့ ဆိုရငျတော့ ဒီအခြိနျဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ သူတို့ ကစားပုံကို ပွောငျးလဲဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။
သူတို့အသငျးဟာ အခြိနျတိုငျး အခွအေနေ ဆိုးနဖေို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောက ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ဒီတဈပတျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲမှာတော့ (၂-၁) ရလဒျ နဲ့ အနိုငျရသှားလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
အကျစတှနျဗီလာနဲ့ ပှဲမှာ ကံဆိုးပွီး ပငျနယျတီ မဝငျခဲ့လို့ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗီလာရီးရဲလျကို အနိုငျယူခဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ ရလဒျတှဟော ခနျ့မှနျးရ ခကျပါတယျ။
အဲဗာတနျအသငျးကတော့ အမှတျပေးဇယားမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ရမှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြအရ အဆငျ့(၅)မှာရပျတညျနပွေီး ဒီရာသီမှာ ရလဒျပိုငျးတှအေရ မဆိုးရှားပမေယျ့ သူတို့မှာလညျး စိတျပူစရာ ဒဏျရာ ပွဿနာတှေ ရှိနပေါတယျ။ အသငျးရဲ့ အဓိက ပှဲထှကျ ကစားသမား အပွညျ့အစုံနဲ့သာ ပှဲထှကျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သူတို့ဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို ဖိအားတှေ ပေးနိုငျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈပတျ အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ ကနျမယျ့ ပှဲမှာတော့ လုပျနိုငျဦးမယျလို့ မထငျပါဘူး။
ပှဲခနျ့မှနျးခကျြ ယူနိုကျတကျ ၂-၁ အဲဗာတနျ။
ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗီလာရီးရဲလျကို နောကျကြ အနိုငျဂိုးသှငျးယူပွီး နိုငျပှဲရယူနိုငျခဲ့တာဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့နိုငျပှဲတဈခုဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဟာ နောကျကနေ လိုကျကစားရပွီးနောကျ ပှဲအတှငျးမှာ သုံးပှဲဆကျ အရေးနိမျ့တော့မှာပဲ ဆိုတဲ့ ဝဖေနျခံရမှုတှေ ရှိနခေဲ့တာပါ။ နောကျဆုံးမိနဈမှာတော့ ရျောနယျဒိုရဲ့ ပှဲအပျေါ အာရုံစူးစိုကျတဲ့ နိုငျပှဲရယူလိုမှုအပျေါမှာပဲ သူတို့အသငျးအတှကျ လိုအပျတဲ့ ရလဒျကို ရယူသှားနိုငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ၊ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲနှဈခုမှာ ပှဲထှကျ(၅) ကွိမျ ကစားအပွီး (၅) ဂိုး သှငျးယူထားတဲ့ ရျောနယျဒိုဟာ အခုကွုံတှနေ့တေဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားကှကျ နညျးစနဈ ပွဿနာတှနေဲ့ ကငျးလှတျနတေဲ့သူပါ။ ဒီတဈပတျမှာ အဲဗာတနျအသငျးနဲ့ တှဆေုံရမှုဟာလညျး ဆိုးလျရှားရဲ့ ယူနိုကျတကျအတှကျ ခကျခဲတဲ့ စမျးသပျမှု ဖွဈလာမှာသခြောပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုရငျ ဘငျနီတကျဈ လကျထကျမှာ အဲဗာတနျအသငျး ဘယျလောကျတောငျ ကောငျးနလေဲဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့ မွငျနရေလို့ပါပဲ။
မနှဈတုနျးက မကျဂှိုငျးယား မပါဝငျနိုငျခြိနျမှာ အသငျးရဲ့ ခံစဈပိုငျးက အတော့ကို ရုနျးကနျခဲ့ရသလို အခုအခြိနျမှာ ဒဏျရာကွောငျ့အနားယူနရေတဲ့ မကျဂှိုငျးယား မပါဝငျဘဲ အဲဗာတနျအသငျး ကိုရငျဆိုငျရဖို့ရှိနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈမှာ ဗာရိနျး ရောကျလာတာကွောငျ့ သူတို့ခံစဈက တောငျ့တငျးလာနပွေီလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ အဲဗာတနျမှာလညျး ကလိုငျးဗကျလီဝငျ မပါဝငျနိုငျသေးတာက ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ဖိအားလြှော့စနေိုငျသလို မာဆေးဆိုဒျအသငျးအတှကျလညျး တိုကျစဈပိုငျးမှာ အားနညျးခကျြဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
ပှဲခနျ့မှနျးခကျြ ယူနိုကျတကျ (၂-ဝ) အဲဗာတနျ။
အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် ဘယ်လိုရလဒ်တွေဖြစ်လာမလဲလို့ ပေါလ်မာဆန် နဲ့ လောရိုးတို့ကပြောပြီ။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ဗီလာရီးရဲလ်ရဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကိုခံခဲ့ရပြီး သုံးပွဲဆက် အရေးနိမ့်တော့မယ့်အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း သူနဲ့ ရမှတ်တူ ဇယားအောက်က အဲဗာတန်အသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စနေနေ့ အစောပိုင်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ အဲဗာတန်တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကို နာမည်ကျော် ပွဲခန့်မှန်းသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပေါလ်မာဆန်နဲ့ လောရိုးတို့ ကသူတို့ရဲ့ အမြင်တွေနဲ့ သုံးသပ်ပြထားကြပါတယ်။ ပေါလ်မာဆန် ကတော့ ယူနိုက်တက်အသင်း ကပ်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပေမယ့် လောရိုးကတော့ (၂)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ယူသွားမယ်ဆိုပြီး ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပွဲအဖြေက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ…? ဘယ်သူ့ရဲ့ သုံးသပ်မှုက ပွဲပြီးရလဒ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်လေမလဲ…? ပွဲအပြီးမှာ ပြောင်းပြန်ရလဒ်တွေ ထွက်လာမလားဆိုတာကတော့….
ပေါလ်မာဆန် ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်
အိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ ဒီတစ်ပတ် စနေနေ့၊ ညနေ ၆ နာရီမှာ အဲဗာတန်နဲ့ ကစားမယ့် ယူနိုက်တက်က ဘယ်လောက် ကံကောင်းနိုင်ဦးမလဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗီလာရီးရဲလ်က သူတို့ကို ဘောလုံးကို ဘယ်လိုကစားရလဲ ဆိုတာ ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကံကောင်းသွားခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ အနိုင်ဂိုး ရသွားခဲ့တာပါ။
ဆုဖလားတွေရယူနိုင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ သူတို့ ကစားပုံကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
သူတို့အသင်းဟာ အချိန်တိုင်း အခြေအနေ ဆိုးနေဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲမှာတော့ (၂-၁) ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ ပွဲမှာ ကံဆိုးပြီး ပင်နယ်တီ မဝင်ခဲ့လို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗီလာရီးရဲလ်ကို အနိုင်ယူခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ ရလဒ်တွေဟာ ခန့်မှန်းရ ခက်ပါတယ်။
အဲဗာတန်အသင်းကတော့ အမှတ်ပေးဇယားမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်အရ အဆင့်(၅)မှာရပ်တည်နေပြီး ဒီရာသီမှာ ရလဒ်ပိုင်းတွေအရ မဆိုးရွားပေမယ့် သူတို့မှာလည်း စိတ်ပူစရာ ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အသင်းရဲ့ အဓိက ပွဲထွက် ကစားသမား အပြည့်အစုံနဲ့သာ ပွဲထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို ဖိအားတွေ ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပတ် အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကန်မယ့် ပွဲမှာတော့ လုပ်နိုင်ဦးမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
ပွဲခန့်မှန်းချက် ယူနိုက်တက် ၂-၁ အဲဗာတန်။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗီလာရီးရဲလ်ကို နောက်ကျ အနိုင်ဂိုးသွင်းယူပြီး နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့တာဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ နောက်ကနေ လိုက်ကစားရပြီးနောက် ပွဲအတွင်းမှာ သုံးပွဲဆက် အရေးနိမ့်တော့မှာပဲ ဆိုတဲ့ ဝေဖန်ခံရမှုတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာတော့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ပွဲအပေါ် အာရုံစူးစိုက်တဲ့ နိုင်ပွဲရယူလိုမှုအပေါ်မှာပဲ သူတို့အသင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရလဒ်ကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်၊ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုမှာ ပွဲထွက်(၅) ကြိမ် ကစားအပြီး (၅) ဂိုး သွင်းယူထားတဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ အခုကြုံတွေ့နေတဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားကွက် နည်းစနစ် ပြဿနာတွေနဲ့ ကင်းလွတ်နေတဲ့သူပါ။ ဒီတစ်ပတ်မှာ အဲဗာတန်အသင်းနဲ့ တွေဆုံရမှုဟာလည်း ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ယူနိုက်တက်အတွက် ခက်ခဲတဲ့ စမ်းသပ်မှု ဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဘင်နီတက်စ် လက်ထက်မှာ အဲဗာတန်အသင်း ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းနေလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရလို့ပါပဲ။
မနှစ်တုန်းက မက်ဂွိုင်းယား မပါဝင်နိုင်ချိန်မှာ အသင်းရဲ့ ခံစစ်ပိုင်းက အတော့ကို ရုန်းကန်ခဲ့ရသလို အခုအချိန်မှာ ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့ မက်ဂွိုင်းယား မပါဝင်ဘဲ အဲဗာတန်အသင်း ကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာ ဗာရိန်း ရောက်လာတာကြောင့် သူတို့ခံစစ်က တောင့်တင်းလာနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ အဲဗာတန်မှာလည်း ကလိုင်းဗက်လီဝင် မပါဝင်နိုင်သေးတာက ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ဖိအားလျှော့စေနိုင်သလို မာဆေးဆိုဒ်အသင်းအတွက်လည်း တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အားနည်းချက်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ပွဲခန့်မှန်းချက် ယူနိုက်တက် (၂-ဝ) အဲဗာတန်။